Guddoomiyaha ONLF iyo sida cusub ee uu doonayo in loo xoreeyo Ogadeniya - BBC News Somali
Guddoomiyaha ONLF iyo sida cusub ee uu doonayo in loo xoreeyo Ogadeniya
8 Agoosto 2019
Hogaamiyaha jabhadda ONLF Admiral Maxamed Cusmaan
Jabhada Onlf waxay mudo dheer ku jirtay halgan ay ku doonaysay in ay ku xoreyso deegaanada Soomaalida Ethiopia, marxalado kala duwan ayuu halgankii hubaysnaa ee ONLF uu soo maray.
Waxey dagaalo la galeen ciidamadii dalkaasi Ethiopia ee hoos tagayay maamuladii kala duwanaa ee soo xukumayay dalkaasi.
Isbadal guud ee ka dhacay dalkaasi ee uu horseedka ka haa Abiy Axmed ayaa hal mar isbadal siyaasadeed u horseeday siyaasadda wadankaasi oo ay qayb ka ahaayeen ururkii ONLF.
Dabaysha siyaasada cusub ee Ethiopia ayaa saamaysay ururka Onlf oo lagu dhawaaqay sannadkii 1984 , heshiis dhex maray labada dhinac sannadkii 2018 ayaa markiiba waxa laga saaray liiska argagixisada, halka wada hadalo dheer kadib lagu guulaystay in halgankii ururka Onlf si nabad ah ugu soo xaroodaan magalooyinka waawayn ee deegaanka Soomaalida Ethiopia.
Jabhadda ONLF oo 20 sano kaddib gaartay Jigjiga
ONLF: Kama tanaasuleyno mowqifka gooni iisu taagga
Magaca Jabahdda ONLF ma yahay mid qabiil?
Mudo kadib oo ay ONLF ay ku dhawaaqday in ay yihiin xisbi siyasadeed, halka siyaasiyiinta ururku ay ku hawlan yihiin isbadal horseeda hadafkoodii xornimo raadinta oo hab casri ah loo marayo,
''Waxad ka garanaysaa in aannu talaabo horumar ah qaadnay, dalkan Ethipia ama Dalkayaga meesha kaliya ee nabad galyo buuxda ka jirto waa dalkanaga,shacab-ku wuxu qabsan waayo mooyee in aannu xaquuqdayada raadsano wax naga hortaagan ma jirto'' sidaas waxa BBC-da u sheegay hoggaamiyaha Jabhadda Xoreynta Ogadeniya ee ONLf Admiral Maxamed Cumar Cusmaan.
(Midig) Abaandduule ka tirsan ciidanka ONLF
Hogaamiyaha jabhadda Maxamed Cusmaan ayaa sheegay in waligood waxa ay u dagaalamayeen ay tahay in ay helaan madaxbanaani, waxay bilaabeen siyaasad kale oo ay jabhadda ONLF ay ku doonayso in ay hir galiyaan siyaasada cusub ee ay doonayaan in ay ku xoreeyaan Ogadeeniya.
''Hawlahayaga mar walba waanu qiimaynaa, marka dadkayaga aannu qiimaynay, dariska qiimaynay markaan Ethiopia sida ay tahay qiimaynay waxa noo muuqatay in ay hada ugu faa'iido badan tahay, anaga oo aan ka leexan fakarkeena in aannu dalkayaga tagno si aannu shacabkayaga isku bayj u akhrino, waxan ka dhaadhicinayna in ay xaquuq ka maqan tahay'' sidaa waxa sheegay mar kale Maxamed Cismaan.
Deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa kamid ah deegaanada ugu kheyraadka badan wadanka Ethiopia, magaalooyinka waawayn ee deegaanka Soomaalida ayaa laga dareemayaa in uu ka jiro isdhexgal dhanka bulshada ah iyo horumar.
Gabar ardayad ah oo qiratay in ay ka been sheegtay macalin qudha laga jaray kal hore
Madaxweynaha Jabuuti oo sheegay sababtii uu u aamusay markii Soomaaliya ay ka carootay guddigii xaqiiqo raadinta
Muxuu yahay App-ka Clubhouse ee ay Soomaalidu ka daba dhacday?
Ninkii ugu taajirsanaa dunida intay iska furtay ayay macallin iskuul guursatay
"Maalin madow ayay u tahay Muslimiinta Switzerland"